၀၂ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၉
ပုံ- ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အရင်းအမြစ်စင်တာ ( ကော့ သောင်း)
ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ အဖမ်းခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အယောက် ၉၀ နီးပါးကို ရနောင်း- ကော့သောင် နယ်စပ်ကနေ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ လူကုန်ကူးခံရမှုနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး အဖမ်းဆီး ခံရသူတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အပြည့်အစုံကို VOA သတင်းထောက် မအေးအေးမာက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းနေရာအသီးသီးကနေ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ထိုင်းအစိုးရက ရနောင်းကနေ ကော့သောင်းလမ်းကတဆင့် ပြန်လွဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါ။ မြန်မာဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အတူလွဲပြောင်းယူခဲ့ကြောင်း ကော့သောင်းမြို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အရင်းအမြစ်စင်တာ တာဝန်ခံဦးမိုးဝေက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တောင်ပိုင်း ရနောင်း၊ ဖူးခက် ၊ စူရာတ်ဌာနီသရ ၊ကပီ ၊နာရာသီဝ ၊ဆုံခလာ တို့ ဘက်က နေရက်ပြည့်လို့ပြန်လွတ်လာတဲ့ အုပ်စုရှိတယ် အဲဒီထဲမှာ စာရွက်စာတမ်း မပြည့်စုံတာရယ် အလုပ်ရှင် မတူတာရယ်တွေပါတယ်။ အခု ၃၁ရက်နေ့ က လွတ်လာတဲ့အထဲမှာ ယောင်္ကျားလေးက ၇၆ ယောက် ၊မိန်းက လေးက ၁၁ ယောက်ပါတယ်။”
အခုပြန်လွဲပြောင်းပေးတဲ့ အထဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးစင်တာမှာ ၄ လကျော်ကြာ နေထိုင်ပြီး အမူရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ လူကုန်ကူးခံရသူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“လူကုန်းကူးခံရတာ တဖွဲ့ပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်း ? သာယာဝတီခရိုင် မင်းလှက ၈ယောက်ပါတယ်။ သူတို့ အားလုံး ၄ လကျော်ကြာ ထိုင်းလူကယ်ပြန်စင်တာမှာ နေရတယ် ပြောတယ်။ စင်တာထဲမှာ နေထိုင်ရတာ နေထိုင်စားသောက်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ် ပြောတယ်။ ၃ လထက်ကျော်နေရတဲ့ သူတွေကတော့ နစ်နာတဲ့အတွက် တဦးကို ဘတ်ငွေ ၃ထောင်စီပေးတယ်ပြောတယ်။ အရင်တအုပ်စုက တယောက် ၅ရာစီပဲ ရတယ်။ ဒီအုပ်စုကတော့တရားရုံး ၂ကြိမ် တက်ရတယ်။ လူကုန်ကူးမူ မမြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ရော (လ၀က) အထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့ သူနဲ့ အတူကျန်တဲ့အချုပ်ကျတဲ့သူတွေနဲ့ ရောပို့ လာတယ်။”
ထိုင်းနိုင်ငံက ထိန်းသိမ်းရေး အချုပ်တွေမှာ ရက်ပြည့်ပြီးနောက် တရားဝင်ပြန်ပို့ခဲ့တာဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဘက် တာဝန်ရှိသူတွေက စစ်ဆေးပြီး သူတို့ ကိုလည်း နေရပ်ပြန်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“အချုပ်ကျတဲ့သူတွေက ၄၅ရက်ရှိတယ်။ တဦးကို ၂၅ရက်ရှိတယ်။ နေရာအသီးသီးက နေလာစုတာ ရနောင်းမှာ လာစုတာ ရနောင်းမှာ ၂ရက် ၃ရက်ကြာပြီးတော့မှ ရနောင်းဂိတ်ကနေ မြန်မာဘက်က ကော့သောင်းကိုပို့ လာတယ်။ မြန်မာဘက်က လ၀က တို့ ၊ ရဲတို့ လူကယ်ပြန်တို့ ကြိုဆိုပြီးကျနော်တို့ က စစ်ဆေးတာပေါ့။ သူတို့ရွာကိုပြန်တဲ့ အခါသူတို့ အထောက်အထားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က ရန်ကုန်အထိ ကားကိုစီစဉ်ပေးတာပေါ့ Resource ဌာနတွေကပေါ့။”
အောက်တိုဘာလထဲမှာပဲ ရနောင်း၊ ကော့သောင်းလမ်းကနေ အခုလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀၀ကျော်ကို ထိုင်းဘက်က လွဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လူကုန်ကူးမူတွေဆက်စပ်ပြီး စစ်ဆေးခံရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား၁၅၀ နီးပါးလည်း ထိုင်းက ကယ်ဆယ်ရေးစင်တာတွေမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး တချို့ကိုတော့ ထိန်းသိမ်းရေး အချုပ်စခန်းတွေမှာပဲထားရှိပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၇ထောင်လောက်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး သူတို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့လူပွဲစား ၁၅၀လောက်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။
တရားမဝငျလာရောကျတဲ့ မွနျမာ ၉၀ နီးပါး ထိုငျးက ပွနျပို့
ထိုငျးနိုငျငံထဲမှာ အဖမျးခံနရေတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား အယောကျ ၉၀ နီးပါးကို ရနောငျး- ကော့သောငျ နယျစပျကနေ အောကျတိုဘာလ ၃၁ ရကျနမှေ့ာ ထိုငျးအာဏာပိုငျတှကေ မွနျမာနိုငျငံဘကျကို ပွနျလညျလှဲပွောငျး ပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီအထဲမှာ လူကုနျကူးခံရမှုနဲ့ ဆကျနှယျပွီး အဖမျးဆီး ခံရသူတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။
အပွညျ့အစုံကို VOA သတငျးထောကျ မအေးအေးမာက သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံ တောငျပိုငျးနရောအသီးသီးကနေ ဖမျးဆီးခံရတဲ့မွနျမာနိုငျငံသားတှကေို ထိုငျးအစိုးရက ရနောငျးကနေ ကော့သောငျးလမျးကတဆငျ့ ပွနျလှဲပွောငျးပေးခဲ့တာပါ။ မွနျမာဘကျက တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ အတူလှဲပွောငျးယူခဲ့ကွောငျး ကော့သောငျးမွို့ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမား အရငျးအမွဈစငျတာ တာဝနျခံဦးမိုးဝကေ အခုလိုပွောပွပါတယျ။
“ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ တောငျပိုငျး ရနောငျး၊ ဖူးခကျ ၊ စူရာတျဌာနီသရ ၊ကပီ ၊နာရာသီဝ ၊ဆုံခလာ တို့ဘကျက နရေကျပွညျ့လို့ပွနျလှတျလာတဲ့ အုပျစုရှိတယျ အဲဒီထဲမှာ စာရှကျစာတမျး မပွညျ့စုံတာရယျ အလုပျရှငျ မတူတာရယျတှပေါတယျ။ အခု ၃၁ရကျနေ့ က လှတျလာတဲ့အထဲမှာ ယောင်ျကြားလေးက ၇၆ ယောကျ ၊မိနျးက လေးက ၁၁ ယောကျပါတယျ။”
အခုပွနျလှဲပွောငျးပေးတဲ့ အထဲမှာ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ ကယျဆယျရေးစငျတာမှာ ၄ လကြျောကွာ နထေိုငျပွီး အမူရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ လူကုနျကူးခံရသူတှလေညျးပါဝငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“လူကုနျးကူးခံရတာ တဖှဲ့ပါတယျ။ ပဲခူးတိုငျး ? သာယာဝတီခရိုငျ မငျးလှက ၈ယောကျပါတယျ။ သူတို့အားလုံး ၄ လကြျောကွာ ထိုငျးလူကယျပွနျစငျတာမှာ နရေတယျ ပွောတယျ။ စငျတာထဲမှာ နထေိုငျရတာ နထေိုငျစားသောကျရတာ အဆငျပွပေါတယျ ပွောတယျ။ ၃ လထကျကြျောနရေတဲ့ သူတှကေတော့ နဈနာတဲ့အတှကျ တဦးကို ဘတျငှေ ၃ထောငျစီပေးတယျပွောတယျ။ အရငျတအုပျစုက တယောကျ ၅ရာစီပဲ ရတယျ။ ဒီအုပျစုကတော့တရားရုံး ၂ကွိမျ တကျရတယျ။ လူကုနျကူးမူ မမွောကျဘူးဆိုပွီးတော့ရော (လဝက) အထောကျအထားမပွညျ့စုံတဲ့ သူနဲ့ အတူကနျြတဲ့အခြုပျကတြဲ့သူတှနေဲ့ ရောပို့လာတယျ။”
ထိုငျးနိုငျငံက ထိနျးသိမျးရေး အခြုပျတှမှော ရကျပွညျ့ပွီးနောကျ တရားဝငျပွနျပို့ခဲ့တာဖွဈလို့ မွနျမာနိုငျငံဘကျ တာဝနျရှိသူတှကေ စဈဆေးပွီး သူတို့ကိုလညျး နရေပျပွနျနိုငျဖို့ စီစဉျပေးခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“အခြုပျကတြဲ့သူတှကေ ၄၅ရကျရှိတယျ။ တဦးကို ၂၅ရကျရှိတယျ။ နရောအသီးသီးက နလောစုတာ ရနောငျးမှာ လာစုတာ ရနောငျးမှာ ၂ရကျ ၃ရကျကွာပွီးတော့မှ ရနောငျးဂိတျကနေ မွနျမာဘကျက ကော့သောငျးကိုပို့ လာတယျ။ မွနျမာဘကျက လဝက တို့၊ ရဲတို့လူကယျပွနျတို့ကွိုဆိုပွီးကနြျောတို့က စဈဆေးတာပေါ့။ သူတို့ရှာကိုပွနျတဲ့ အခါသူတို့အထောကျအထားမရှိတော့ဘူးဆိုရငျတော့ ကနြျောတို့က ရနျကုနျအထိ ကားကိုစီစဉျပေးတာပေါ့ Resource ဌာနတှကေပေါ့။”
အောကျတိုဘာလထဲမှာပဲ ရနောငျး၊ ကော့သောငျးလမျးကနေ အခုလိုမြိုး မွနျမာနိုငျငံသား ၁၀၀ကြျောကို ထိုငျးဘကျက လှဲပွောငျးပေးခဲ့ပါတယျ။ အခုဆိုရငျလူကုနျကူးမူတှဆေကျစပျပွီး စဈဆေးခံရတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား၁၅၀ နီးပါးလညျး ထိုငျးက ကယျဆယျရေးစငျတာတှမှောရှိနဆေဲဖွဈပွီး တခြို့ကိုတော့ ထိနျးသိမျးရေး အခြုပျစခနျးတှမှောပဲထားရှိပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံတောငျပိုငျးမှာ ၂၀၁၉ခုနှဈအတှငျး တရားမဝငျခိုးဝငျလာတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား ၇ထောငျလောကျကို ဖမျးဆီးခဲ့ပွီး သူတို့ကိုပို့ဆောငျခဲ့တဲ့လူပှဲစား ၁၅၀လောကျကိုလညျး ထိနျးသိမျးခဲ့ပါတယျ။
တရားမ၀င် ၀င်ရောက်သူ ၇၀၀ ကို ကန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဖမ်းဆီး
ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း အသတ်ခံရမှု သံသယရှိသူ မြန်မာတဦး ဖမ်းဆီးခံရ
မြန်မာနှစ်ဦးသေဒဏ်ချခံရတဲ့ လိပ်ကျွန်းအမှု ရန်ကုန်မှာ ရှင်းလင်း